Xildhibaan Dalxa: Muqdisho waxaa keenay Meydka Wiil Soomaaliyeed oo la jar-jaray – Kalfadhi
Xildhibaan Dalxa: Muqdisho waxaa keenay Meydka Wiil Soomaaliyeed oo la jar-jaray
MUQDISHO, 11 JAN 2019 (KALFADHI) –Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo manta Dalka dib ugu soo laabtay ayaa sheegay in Dalka Koonfur Afrika laga keenay Meydka Wiil Soomaaliyeed oo la soo jar-jaray kadib markii ay weerarayn Koox burcad K/Afrikaan ah.
Xildhibaan Dalxa ayaa sheegay in meydka wiilkaan Soomaaliyeed iyo Wiilal kale ay hal diyaarad ka soo wada raaceyn Dalka K/Afrika. Ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi ayuu shegay in dhib badan ay ku qabaan weeraro badan oo ay kala kulmayaan kooxo u dhashay wadankaasi.
“Magaalada waxaan keenay meydka wiil Soomaaliyeed oo Ganacsade ku ahaa K/Afrika oo ay dileen kadibna ay jar-jareyn Kooxo Gaan-giistar ah”, ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa.
“Markii aan muddo hawada ku jirnay ayaan ogaaday in wiil meyd ah diyaarada la soo saaray, kadib wiilal kale ee la socday ayaa ii sheegay in si arxan darro loo dilay”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Xildhibaan Dalxa.
Dowladda Soomaaliya ayuu ugu baaqay iney Dowladda K/Afrika kala hadasho dhibaatada loo geesto muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku Ganacsada Dalka South Africa. Dalxa ayaa sheegay in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay waxbadan ku kordhiyaan Koonfur Afrika oo ilbaxnimo ganacsi ah, hayeeshee ay ugu badalayaan weeraro bahalnimo ah sida uu hadalka u dhigay.
“Wasaaradda arimaha dibadda Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa iney u kacdo dadkaas Soomaaliyeed ee dhibaatada loo geysanyo”, ayuu markale yiri Barafasoor Dalxa.“Dalka K/Afrika waxaan u galnay dadaal badan balse dadkeyna ayey dhameynayaan”, ayuu yiri isagoo hadalkiisa sii wata.
Fadhiga Baarlmaanka Soomaaliya ayuu sheegay inuu geyn doono arintaan si wax looga weydiiyo Wasaaradda arimaha dibadda Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa qiray in dhib badan ay qabaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee Ganacsiga ku leh magaalooyin iyo gobolo ka mid ah Dalka Koonfur Afrika hadii aan la caawinna waxa uu sheegay in dhibka intaan ka badnaan doono.